सुदूरपश्चिममा क्वारेन्टाइन अवधि २१ दिन पुर्‍याइयो- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
मुख्यमन्त्री भट्टद्वारा प्रदेशवासीका नाममा सम्बोधन
धनगढी — सुदूरमश्चिममा मात्रै कोरोना संक्रमितको संख्या चार पुगेको र संक्रमण जोखिमको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेपछि क्वारेन्टाइन अवधि २१ दिन पुर्‍याइएको छ।
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आइतबार प्रदेशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै हाल १४ दिने क्वारेन्टाइनमा बसिरहेकाहरु अब २१ दिनसम्म बस्नुपर्ने बताए।
सुदूरपश्चिम कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै उनले सम्भावित जोखिमको सामना गर्न प्रदेश सरकार गम्भीरतासाथ तयारीमा जुटिरहेको बताए। ‘कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट प्रदेशवासीलाई जोगाउन प्रदेश सरकारका सबै संयन्त्र परिचालित छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले कोष खडा गरेर सरकारका तर्फबाट ४० करोड जम्मा गरेको छ।’ उनले कोरोनाको उपचारका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीलाई विषेश अस्पताल घोषणा गर्नुका साथै महाकाली प्रादेशिक अस्पताल, जिल्ला अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालयलाई कोरोनाको उपचार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम व्यवस्था गरिएको बताए।
भारत लगायतका देशबाट स्वदेश प्रवेश गर्न चाहने नेपाली सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेकोप्रति संघीय सरकारसँग आवश्यक जानकारी गराइएको उनको भनाइ थियो।
मुख्यमन्त्री भट्टले अहिले उत्पन्न जटिल अवस्थाका कारण दैनिक ज्यालादारी गरी खाने र असहाय व्यक्तिको जीवनयापनका लागि सरकारले राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन पहल गरिएको बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुरमा चार जना कोरोना संक्रमित भेटिएपछि संघीय सरकारले कैलाली कञ्चनपुरमा र्‍यापिड टेस्टको माध्यमबाट रफ्तारमा नमुना परीक्षण सुरु गर्न लागेको मुख्यमन्त्री भट्टले जानकारी दिए। साथै उनले तोकिएको अवधिभर लकडाउनलाई पूर्णरुपमा पालना गर्न प्रदेशवासीसमक्ष अपिल गरेका छन्।
प्रकाशित : चैत्र २३, २०७६ २०:४३
मनाङबाट १२ विदेशी फर्कन मानेनन्
लमजुङ — सरकारले विदेशी पर्यटकलाई आफ्नो देश फर्कन आग्रह गरे पनि मनाङबाट १२ जना पर्यटक फर्कन मानेका छैनन्। चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्ग घुम्न आएका उनीहरु लकडाउनपूर्व नै मनाङमा थिए।
सबै पर्यटकलाई आफ्नो देश फर्कन आग्रह गर्दै पोखरा तथा काठमाडौं फर्किने व्यवस्था मिलाए पनि १२ जना मनाङमै रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज पौडेलले बताए। ‘हामीले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर विदेशीलाई आफ्नो देश फर्कन आग्रह गर्‍यौं। तर, उनीहरुले मनाङ छोडेनन्,’ उनले भने, ‘अहिले बुझ्दा उनीहरु आफ्नो देश फर्किन नचाहेको बुझ्यौं। जान्न भन्नेलाई बलजफ्ती गर्न पनि भएन।’
डीएसपी मेखबहादुर कुँवरका अनुसार उनीहरु छुट्टाछुट्टै ठाउँमा छन् । तल्लो मनाङको नासों गाउँपालिका १, तालमा २, वडा नं. ९ दानक्युमा ३, माथिल्लो मनाङको मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकामा १, पिसाङमा २ र वडा नं. ४ र ५ मा ५ जना छन्। उनीहरु अमेरिका, बेलायत, इटाली, फ्रान्स, स्वीट्जरल्यान्ड, रसिया, अर्जेन्टिना र स्पेनका हुन्।
लकडाउनपछि मनाङ प्रशासनले ३९ जना पर्यटकलाई उद्धार गरी पोखरा पुर्‍याएको छ। पहिलोपटक २४, दोस्रोपटक ६ र तेस्रोपटक ९ जना पर्यटकको उद्धार गरिएको थियो। अहिलेका पर्यटकले आफ्नो देशमा भन्दा मनाङमै सुरक्षित रहेको बताएका छन्।
प्रकाशित : चैत्र २३, २०७६ २०:३५